अस्पताल अगाडि जुत्ता सिउँने मोचीको हातबाट जुस पिउँदै डा. केसीले तोडे अनसन
काठमाडौँ, २८ पुस । अनसनरत डा गोविन्द केसीले अन्तत सनिबार सरकारसँग ५ बुँदे सहमति गर्दै अनसन तोडेका छन् । केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल अगाडि पच्चीस वर्षदेखि जुत्ता सिउँदै आएका सिरहाका सिलाउने नथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिई अनसन तोडेका हुन्।
लगातार पाँच दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका केसीले सरकारसँग आफ्ना मागहरुको विषयमा पाँच वटा बुँदामा सहमति भएसँगै शनिबारबाट तोडे । अनसन तोड्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले सहमति कार्यान्वयन नभइन्जेल खबरदारी भने जारी रहने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल सकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री दीपक बोहोरासँग करिव साँढे ७ बजे भएको वार्ता सहमतिमा पुगेपछि डा. केसी अनशन तोड्न राजि भएका थिए ।
सहमति पत्र अनुसार अब सरकार केसीका माग बमोजिम ७ दिनभित्रै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्ने सहमत भएको छ ।
शशि शर्मालाई सर्वेच्चले ४ दानको लागि डिन नियुक्त गर्न सिफारिस गरेसँगै डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै अनसन बसेका थिए । तर, पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विषयमा फाइल मगाएको र थप छानबिनको काम हुने भएकाले सरकारी टोलीले केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको हो ।
प्रकाशित : शनिबार, पुष २९, २०७४११:४९
५१ मिनेट अगाडि रासस